Xasaasi: Musharax C/Raxmaan Cabdi Shakuur oo Ka jawaabay Eedeynta la Xiriirta Dacwada Badda Soomaliya iyo kenya – Kismaayo24 News Agency
by Tifaftiraha K24 20th September 2016 086
Musharaxa u taagan Qabashada Xilka Madaxtinimada Soomaliya Cabdi Raxmaan cabdi Shakuur ayaa ka hadlay Eedeynta loo jeediyay ee ku aadana in uu qeyb ka ahaa Masuuliyiintii Dowladii KMG aheyd ee saxiixay Heshiiskii Is afgaradka ee MOU kaasi oo Kenya la sheegay in lagu siiyay qeyb ka mid ah Badda Soomaliya.
Hadaba Dacwada Badda ee Labada dal ayaa shalay waxa ay ka Furanta Magaalada hague ee Dalka Holland waxaana Garyaqaanada kenya u doodaya oo shalay Maxkamada ay dhageysatay ay Meesha ka cadeeyeen in Kenya Heshiiska Badda ay la gashay Soomaliya ay saxiixeen Masuuliyiintii Dowladii KMG waxaana Saxiixay Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur oo xiligaas ahaa Wasiirkii Arimaha Dibadda iyo iskaashiga Caalamiga.
Musharaxa ayaa Bartiisa Facebooka ku soo daabacay Eedeynta loo jeediyay iyo Sida uu u dhacay Heshiiskii Is afgaradka ee MOU.
Halkaan Hoose ka Aqriso 5 qodob oo Musharaxa uu ka hadlay :
1- Waxaan aad ugu kalsoonahay kartida iyo xirfadda garyaqaanadda Soomaaliya u metelaya dacwadda Maxkadda Caalimga ee Heeg ka socota.
2- Waxaan ku kalsoonahay in MoU aan saxiixnay 2009 uu difaacayo danaha Soomaaliya khuseeyana qalfoof badeedka ( continental shelves) oo uu san shaqo ku lahayn xuduud badeed (Maritime bounders). Waxaan taas cadayn doona dooda Qareenadda Soomaaliya metelaya. MoU wuxuu fure u yahay in dacwadda Maxkadda la keeno maadaama wadooyinkii wadahadalka ay soo xirmeen.
3- Waxaa baraha warbaahinta ka socda dacaayad iyo Olole siyaasadeed oo ka dhan Aniga, Shiekh Sharif iyo Cumar C/rashiid kasoo ay wadaan kooxo abaabulan, oo uu adeegaya musharraxiin kale. Waxaa haboon in aan Qadiyad heer Qaran joogta hanti qaranna ah loo adeegsan Olole doorasho oo lagu dhawaacayo sumcadda iyo sharafta masuuliyiin iyo musharraxiin kale. Madaxda iyo Musharraxiinta arrinkaan ku hawlan Waxaan leenahay “Waa ceeb in aad biyo calaw ah ka kaluumaysataan”.
4- Maadaama aan dan guud ka shaqayno waxaan u bareeenay in aan dulqaad u yeelano aflagaadadda, been abuurka iyo buhtaanka, waana wado na looka horeeyey. Sayidunaa Caa’isha ayaa lagu been abuurtay ilaa heer Nabiga iyo xigtadiisa ay ku kala dhinteen, markii danbe uu Ilaaheey beri yeelay. Waxaan ugu baaqaynaa in aan laga hordhicin dooda qareenadda lagana warsugo jawaabta ay bixiyaan.
5- Waxaan diyaar u ahayn in si buuxda u qaado masuuliyadda wixii aan ku gabood falnay, Waa in sidaasoo kale aan wixii guul ahna aan abaalkeeda u yeelanaa
DEG DEG: Shir Maamul ka madax banaan DF loogu sameynayo G/Hiiraan oo Baledweyne ka socda…
Daawo: Saraakiisha tababarka socdaalka iyo jinsiyadda kusoo qaadatay garoomada UK oo muqdisho dib ugu soo laabatay
Tifaftiraha K24 30th April 2017